Afhayeenkii Xisbiga WADDANI Oo Xabsiga Loo Taxaabay | #1Araweelo News Network
Afhayeenkii Xisbiga WADDANI Oo Xabsiga Loo Taxaabay
Hargeysa(ANN)-Xukuumadda Somaliland, ayaa xabsiga dhigtay Af-hayeenka DDANI, Barkhad Jaamac Batuun oo galabta warbaahinta la hadlay, isla markaana si cad u sheegay in Xisbiga WADDANi, aanu ka laabanayn baaqa guddoomiyahooda ee isu soo baxa maalinta beri.
Garyaqaan Barkhad, wuxuu ku eedeeyay xukuumadda inay ciidamo soo dhigtay galabta xarunta xisbga ee dhinaca bari ee Magaalada Hargeysa, waxaana saacado yar kadib soo bxday in xabsiga loo taxaabay Afhayeenkii WADDANI, Garyaqaan Barkhad. sida ay sheegayaan wararka hordhaca ah ee shebekadda wararka ee Araweelo News Networ heshay fiidkii caawa.
Sidoo kale, wararka hordhaca ah ee shebekada Araweelo News soo gaadhaya ayaa sheegaya in saraakiil kale oo xisbiga ah xabsiga loo taxaabay, walaw Xukuumadda Somaliland, weli wax wara ah kasoo saarin xadhiga Xoghayaha WADDANI, Barkhad Jaamac Batuun, isla markaana xisbiga ayaan weli ka hadlin xadhiga Afhayeenka oo ciidamada Boolisku xabsiga u taxaabeen caweyskii Fiidnimo, wax yar kadib markii uu la hadlay warbaahinta.
wixii kasoo kordha wararka saraakiisha Xisbiga WADDANI iyo xaalada kala soco Araweelo News Network,